Kim Jong-un Oo Xaaladdisa Caafimaad Shaki la Galinayay Oo Hadlay | Gaaroodi News
Kim Jong-un Oo Xaaladdisa Caafimaad Shaki la Galinayay Oo Hadlay
Kim Jong-un ayaa maamulada Kuuriyada Waqooyi uga digay iney isu diyaariyaan khatarta fayraska corona iyo dufaanta.
Mr Kim ayaa ka soo muuqday munaasabad kaddib warar la isla dhexmarayay oo shaki gelinayay xaaladdiisa caafimaad.
Kaddib markii lagu dhaawaqay kiis laga shakiyay oo la sheegay in laga helay xadka ay Kuuriyada Koonfureed laga wadaagto laakin ilaa haatan kiiskaasi lama xaqiijin in laga helay iyo laga waayay.
Muuqaalka Kim Jong-un ayaa imanaya iyadoo maalmihii dambe la isla dhexmarayay warar oo ku aaddan caafimaadkiisa kaddib markii uu qaar ka mid ah awoodihiisa ku wareejiyay walaashii Kim Yo-jong Madaxweynaha walaashii Kim Yo-jong xil sare ayey ka haysaa xisbiga shaqaalaha Kuuriyada Woqooyi
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa awood dheeraad ah siiyay dadka isaga ka agdhow oo ay ka mid tahay walaashii Kim Yo-jong, sida ay sheegeyso waaxda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed.
Mr Kim ayaa weli haya awood badan balse qaar ka mid ah waxa uu ku wareejiyay dadka isaga u dhow si uu isaga yareeyo culeyska isku buuqa, waa sida ay sheegtay waaxda sirdoonka.
Wararka ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaanan cusbayn balse markasta waxa ay noqdaan kuwa been oo waxa uu soo muuqdaa isagoo caafimaad qaba.
Waa kuma Kim Jong-un?
Kim Jong-un,waa wiilka ugu yar Kim Jong-il ee xaaskiisii sedaxaad Ko Yong-hui, ay u dhashay waxaana uu dhashay qiyaastii sanadihii 1983-kii ama 1984-kii.
Si kastaba ha noqtee bishii May sanadkii 2011-kii Kim Jong-nam oo laga musaafuriyay dalka Japan isaga iyo walaalkii d Kim Jong,ayaa lagu soo waramay in ay sare u qaaday fursadihiisa.
Dalka Switzerland ayuu wax ku so bartay sida walaalkii Kim Jong-un ayuna iska diiday in reergalbeedku saameyn ku yeeshaan, avoided Western influences, returning home when not in school and dining out with the North Korean ambassador.
Kadib markii uu ku laabtay Pyongyang,waxaa la ogaa Kim Il-sung in uu ku biiray jaamacadda Militariga .
Waxa la rumaysanyahay in hooyadii ahayd xaaskii uu ugu jeclaa aabihii Kim Jong-il, aadna way u amaani jirtay wiilkeeda woo waxay ugu yeedhi jirtay “Xidigga waaberi”.
Bishii Ogost 2010 markii Kim Jong-il booqashada ku tagay Shiinaha, ayaa waxa la sheegayaa in Kim Jong-un uu aabihii socdaalkaa ku wehelinayey. Markaa waxa loo arkayey in uu yahay ninka dhaxli doona aabihii marka uu dhinto, sidiina way u dhacday.
Kim Jong-un wuxu qabtay xilka hogaamiyaha sare ee Kuuriyada Woqooyi isaga oo aan khibrad siyaasadeed iyo mid milateri toona lahayn.
Kim Jong-il, “Hogaamiyihii Qaliga ahaa” inankiisa ayuu u diyaarinyay inuu marka isagu dhinto hogaanka dalka la wareego, waxaanu dhintay bishii Diisember 2011.
Isla markii uu geeriyooday aabihii Kim waxaan lagu amaanay in uu yahay hoggaamiyihii aabihii ku xigi lahaa iyadoona loo magacaabay madaxa xibiga ee gobalka iyo ciidamada mudo labo todobaad gudahood ah geeridii aabihii kadib.
Wixii intaas ka dambeyay inkastoo ay wadahadalo taariikhi ah la yeesheen Mareykanka uuna sameyay horumarka dhana xiriirka kala dhaxeeya waqooyiga Kuuriya, haddana waxaa uu muujiyay sida ay uga go’antahay sii horumarinta barnaamijka hubka ee Kuuriyada Waqooyi isagoo amaraya tibaayooyinka Nukliyeerka iyo gentaalada
Kim wuxu khudbadiisii ugu horaysay shacabka u jeediyey 100 guuradii ka soo wareegtay markii uu dhashay aasaasihii Kuuriyada Woqooi Kim Il-sung 15 Abriil 2012 waxaanu aad u ammaanay hal ku dheggii “milatarigaa mudnaanta leh” waxanu wacad ku maray in waagii dalkiisa loo soo hanjabi jiray “dhamaaday”.